Nyaya yeMafashamo Emunguva yaNoa Yakaitika Zvechokwadi Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Twi Ukrainian Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nyaya yeMafashamo Emunguva yaNoa Yakaitika Zvechokwadi Here?
Mafashamo akanyatsoitika. Mwari ndiye akaakonzera kuitira kuti aparadze vanhu vakaipa, asi akaudza Noa kuti avake areka yaizochengetedza vanhu vaiteerera uye mhuka. (Genesisi 6:11-20)Tine chokwadi chekuti mafashamo akaitika nekuti akanyorwa nezvawo muMagwaro, ayo “akafuridzirwa naMwari.”​—2 Timoti 3:16.
Zvakaitika here kana kuti ingano?
Nei Mafashamo akaitika?
Vanhu vaiziva here kuti kwaizoitika Mafashamo?
Areka yaNoa yakanga yakaita sei?
Noa akaita nguva yakareba sei achivaka areka?
Ngano dzinotaurwa nezveMafashamo
Bhaibheri rinoratidza kuti Noa aitova munhu chaiye uye kuti Mafashamo akatoitika, haisi ngano.
Vanyori veBhaibheri vaibvuma kuti Noa akanga ari munhu chaiye akatorarama. Ezra naRuka vaiva nyanzvi pakurondedzera zvakaitika kare uye vakanyorawo nezvaNoa pavaitaura nezvemadzinza erudzi rwaIsraeri. (1 Makoronike 1:4; Ruka 3:36) Vanyori veEvhangeri Mateu naRuka, vakanyora zvakataurwa naJesu nezveMafashamo.​—Mateu 24:37-39; Ruka 17:26, 27.
Muprofita Ezekieri uye muapostora Pauro vakataurawo nezvaNoa semunhu aiva nekutenda uye akarurama watinofanira kutevedzera. (Ezekieri 14:14, 20; VaHebheru 11:7) Zvaizova nemusoro here kuti vanyori veBhaibheri vataure nezvaNoa semunhu watinofanira kutevedzera asi iye asina kumbobvira avako? Zviri pachena kuti Noa nevamwe varume nevakadzi vaiva nekutenda mienzaniso yatinokwanisa kutevedzera nekuti vaiva vanhu chaivo.​—VaHebheru 12:1; Jakobho 5:17.
Bhaibheri rinotaura zvakanyatsoitika paMafashamo. Bhaibheri parinotaura nezveMafashamo haritangi nekuti “Paivepo,” sekunge kuti ingano. Asi rinotonyatsotaura gore, mwedzi uye zuva rakaitika Mafashamo. (Genesisi 7:11; 8:4, 13, 14) Rinotaurawo makuriro akanga akaita areka. (Genesisi 6:15) Izvi zvinoratidza kuti Bhaibheri rinotsigira kuti Mafashamo akaitika, haisi ngano.
Bhaibheri rinoti chakazoita kuti Mafashamo avepo ndechekuti “kuipa kwomunhu kwakanga kuri kuzhinji.” (Genesisi 6:5) Rinowedzera kuti “nyika yakashatiswa pamberi paMwari wechokwadi” nekuti yakanga yazara nekurwisana uye unzenza.​—Genesisi 6:11; Judha 6, 7.
Bhaibheri rinoratidza kuti zvese izvi zvakakonzerwa nengirozi dzakaipa idzo dzakabva kudenga kuti dzirare nevakadzi. Ngirozi idzi dzakabereka vana vainzi vaNefirimu, avo vaishungurudza vanhu. (Genesisi 6:1, 2, 4) Mwari akabva afunga kubvisa vanhu vakaipa panyika kwosara vanhu vakanaka.​—Genesisi 6:6, 7, 17.
Ehe. Mwari akaudza Noa zvaizoitika uye akamurayira kuti avake areka yaizochengetedza mhuri yake nemhuka. (Genesisi 6:13, 14; 7:1-4) Noa akayambira vanhu nezvekuparadzwa kwaida kuitika, asi vakaisa zvimiti munzeve. (2 Petro 2:5) Bhaibheri rinoti: “Havana kucherechedza kusvikira mafashamo auya akavakukura vose.”​—Mateu 24:37-39.
Areka yaiva zibhokisi zihombe rakanga rakareba mamita 133, rakafara mamita 22 uye kuenda mudenga raiva rakareba mamita 13. * Areka yacho yakanga yakagadzirwa nemuti unobudisa zvinonama, uye yakanga yakanamwa netara kunze nemukati. Yaiva nenhurikidzwa nhatu, uye yaiva nemakamuri akawanda. Yaiva nedhoo uye yaivawo nehwindo nechekumusoro. Zvinoita sekuti denga racho rakanga rakavakwa nenzira yaiita kuti mvura ikwanise kuyerera.​—Genesisi 6:14-16.
Bhaibheri haritauri kuti Noa akaita nguva yakareba sei achivaka areka, asi zvinoratidza sekuti akatora makumi emakore achiivaka. Noa aiva nemakore anopfura 500 mwanakomana wake wekutanga paakaberekwa, uye akanga ava nemakore 600 pakazoitika mafashamo. *​—Genesisi 5:32; 7:6.
Mwari akaudza Noa kuti avake areka vana vake vatatu vatokura uye vatoroora. Vana vake vanofanira kunge vakanga vava nemakore 50 kana kuti 60. (Genesisi 6:14, 18) Saka zvinogona kuita kuti titi areka yakatora makore 40 kana kuti 50 kuti ipere.
Vanhu vanotaura zvakasiyana-siyana nezveMafashamo anotaurwa muBhaibheri, asi zvimwe zvacho zvinoenderana nezviri muBhaibheri. Vazukuru vaNoa pavaipararira nenyika, vanofanira kunge vaiudzawo vana vavo nezveMafashamo. Asi nekufamba kwenguva, nyaya yacho yakatanga kuwedzeredzwa. Inzwa mienzaniso inotevera.
Ngano yechiGiriki: Murume nemukadzi vakapona pamafashamo vakanzi vabereke vana nekukanda matombo kumashure vakafuratira kuitira kuti vanhu vawande panyika. Matombo iwayo ndiwo aizochinja kuita vana.
Ngano yechiHindu: Mumwe murume akaudzwa nehove kuti kuchauya mafashamo achauraya vanhu. Hove yacho yakamuudza kuti agadzire chikepe. Hove iyi ndiyo yakazomutungamirira kuti asaparadzwa nemafashamo.
Ngano yechiBhabhironi: Murume nemukadzi vakapona mafashamo havana kuzofa uye vakabva vava vanamwari.
Ngano yekuCentral America: Mumwe murume nemukadzi nevana vavo vakapona mafashamo asi vamwe vanhu vese vakachinja kuva hove.
^ ndima 21 Bhaibheri rinoshandisa makubhiti parinotaura nezvekukura kwakanga kwakaita areka. “Kubhiti rimwe chete rechiHebheru rakanga rakareba masendimita 44,45.”​—The Illustrated Bible Dictionary, Revised Edition, Chikamu 3, papeji 1635.
^ ndima 23 Kuti uone makore akararama vanhu vakadai saNoa, ona nyaya yakanzi “Ichokwadi Here Kuti Vanhu vomuBhaibheri Vairarama Makore Akawanda Kudaro?” iri muNharireyomurindi yaDecember 1, 2010.
Bhaibheri Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa Bhaibheri Harinyepi Parinotaura Nyaya Dzakaitika Kare Nhoroondo Dzekare Uye Bhaibheri
Tingadzidzei kuna Noa, mudzimai wake, nemhuri yavo?
Vanhu Vanopukunyuka Mafashamo